Dopamine အာရုံခံများသည် Pavlovian ကိုအေးစက်စေသောလှုံ့ဆော်မှုများဖြင့်လှိုင်းတံပိုးကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်။ - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
Dopamine အာရုံခံ circuit ကို-defined စိတ်ခွန်အားနိုးဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူ Pavlovian conditional လှုံ့ဆော်မှုဖန်တီးပါ။
နတ် neuroscience ။ 2018 သြဂုတ်; 21 (8): 1072-1083 ။ Doi: 10.1038 / s41593-018-0191-4 ။ EPub 2018 ဇူလိုင် 23 ။
Saunders BT1,2,3, ရစ်ချတ် JM4,5,6, Margolis eb7, Janak PH သည်8,9,10.
Pavlovian သင်ယူမှုမှတဆင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးတွေကို, ရှင်သန်မှုအတွက်လိုအပ်သောဖြစ်ကြောင်းဆုလာဘ် (ဥပမာ, အစားအစာ) ၏ဝယ်ယူဆီသို့တိရိစ္ဆာန်များကိုလမ်းပြသောအအေးစက်လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်လာသည်။ ကျနော်တို့ပြင်ပဆုလာဘ်၏လွတ်လပ်သော, တွေကိုမှကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်များနှင့်စိတ်ခွန်အားနိုးဂုဏ်သတ္တိများဆွေးနွေးအတွက် midbrain dopamine အာရုံခံ၏အခြေခံကျသောအခန်းကဏ္ဍစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ ကျနော်တို့ discrete အာရုံခံတွေကိုနှင့်အတူယာယီအသင်းအဖွဲ့အတွက်တင်ပြသည့်အခါ dopamine အာရုံခံ၏အကျဉ်း phasic optogenetic စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်, နောက်ပိုင်းတွင်နှစ်ဦးစလုံးဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အပေါ် dopamine အာရုံခံဆဲလျလှုပ်ရှားမှု evoked နှင့် cue-သော့ခတ်အေးစက်အပြုအမူရူးနှမ်းကြောင်းအေးစက်လှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်သူတို့အားတွေကို instantiate လုံလောက်ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အထူးသကျနော်တို့မက်လုံးပေးတန်ဖိုးနှင့် conditional လှုပ်ရှားမှုညျခှနျအား၏မျိုးဆက်များအတွက် dissociable dopamine စနစ်များကိုထုတ်ဖော်, striatum ၏ကွဲပြားခြားနားသောဒေသများမှထုတ်လုပ်တဲ့ dopamine အာရုံခံဆဲလျ subpopulations များအတွက်အလွန်အမင်းကှကျလုပ်ဆောင်ချက်များကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကို dopamine အာရုံခံ, တံခါးဝကိုဖန်တီးရန် function သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောတိုက်နယ်-တိကျတဲ့စိတ်ခွန်အားနိုးအချက်ပြမှုများမှတဆင့် Pavlovian အေးစက် orchestrate နှင့် cue-controlled အပြုအမူတွေကိုပုံဖော်ကဖော်ပြသည်။
နေ့စွဲ: သြဂုတ်လ 2, 2018
dopamine အာရုံခံတနျဖိုးဆည်းပူးဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်၌တွေကိုဖြစ်စေတဲ့အတွက်အခန်းကဏ္ဍရှိပါသလား? နှင့်အညီ, ဒါသည်မှန်လျှင်, dopamine အာရုံခံ၏ကွဲပြားခြားနားသောအုပ်စုများဤလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ငန်းဆောင်တာအစေခံသလဲ?
သူများသည်တက္ကသိုလ်မင်နီဆိုတာ၏ Medical School မှမေးခွန်းများကိုသုတေသီများဖြေဆိုရန်ရှာနေနေကြပါတယ်။
ထုတ်ဝေမကြာမီကသုတေသန သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ University of Minnesota Medical School မှ neuroscientist Benjamin Saunders မှ Ph.D သည် dopamine neuron ကိုမဖွင့်ခင်အလင်းကိုဖွင့်ခြင်းသည်လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်သည့် Pavlovian အေးစက်ပုံစံကိုအသုံးပြုသည်။ ဂန္တ ၀ င် Pavlov ပုံစံသည်ခွေးတစ်ကောင်၏မြည်သံကိုပေါင်းစပ်။ ခွေးတစ်ကောင်အားအရသာရှိသောအမဲသားကိုပေးသည်။ အချိန်တန်သော်ခွေးသည်အသားနှင့်အတူသို့မဟုတ်မပါသည့်အခါမြည်လာသောအခါခွေးကို drool ကိုအေးစေသည်။ သုတေသီများက dopamine neuron ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုခွဲထုတ်ရန်အတွက်ဤသုတေသနတွင်အစားအစာသို့မဟုတ်ရေကဲ့သို့သောအမှန်တကယ်ဆုလာဘ်မရှိခဲ့ပါ။
Johns မှ Patricia Janak ၏ဓာတ်ခွဲခန်းတွင်ပါရဂူဘွဲ့ယူသူအဖြစ်သုတေသနပြုသူ Saunders က“ dopamine neuron တွေဟာဒီယာယီပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်များအတွက်နိမိတ်လက္ခဏာများကိုတန်ဖိုးထားရန်တိုက်ရိုက်တာ ၀ န်ရှိမရှိငါတို့သိချင်ခဲ့တယ်။ Hopkins တက္ကသိုလ်။
Dopamine အာရုံခံဆဲလ်၊ ဦး နှောက်တွင်းရှိဆဲလ်များဟာအကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုရတဲ့အခါမှာဖွင့်သည်။ ၄ င်းတို့သည်ပါကင်ဆန်ရောဂါဖြစ်ပွားသည့်အာရုံကြောများလည်းဖြစ်သည်။
"ငါတို့သိခဲ့ရတယ် dopamine neuron ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဦး နှောက်ကငါတို့ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ပေးတဲ့နည်းတစ်နည်းဖြစ်တယ်" လို့ Saunders ကပြောတယ်။ dopamine အာရုံခံဆဲလ်တစ်ခုတည်းသည်အစားအစာ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အခြားထူးကဲသောအကျိုးကျေးဇူးရှိသည့်အရာများမရှိခြင်းပင်လုပ်ဆောင်မှုများကိုလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်သည်။
ဒုတိယအဓိကမေးခွန်းကိုဖြေဆိုရန်အတွက်သုတေသီများသည် dopamine neurons ၏အစိတ်အပိုင်းများကိုအဓိကပစ်မှတ်ထားခဲ့ကြသည် - ၎င်းသည် nigra (SNc) တွင်တည်ရှိပြီး ventral tegmental (ရိယာ (VTA) တွင်ရှိသောသူများဖြစ်သည်။ ဤရွေ့ကားအာရုံခံဆဲလ်အမျိုးအစားနှစ်မျိုးကိုသမိုင်းဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားသောရောဂါသုတေသနနယ်ပယ်များ၌လေ့လာခဲ့ပြီးပါပြီ - ပါကင်ဆန်ရောဂါရှိ SNc neuron နှင့် VTA အာရုံကြောများ။
သိပ္ပံပညာရှင်များလေ့လာတွေ့ရှိချက်အရအာရုံခံဆဲလ်အမျိုးအစားနှစ်မျိုး၏လှုံ့ဆော်မှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုများသည်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောတုန့်ပြန်မှုများကိုဖြစ်စေသည် - SNc အာရုံခံဆဲလ်များကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းသူများသည်အားတက်လာပြီးတက်ကြွသောလျင်မြန်သောလှုပ်ရှားမှုကိုတုံ့ပြန်ကြသည်။ သို့သော် VTA အာရုံခံဆဲလ်များစတင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသည့်အတွက် cue ၏တည်နေရာကိုချဉ်းကပ်ရန်လှည့်ဖျားသည်။ တုံ့ပြန်မှု
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်တွေကိုတုံ့ပြန်တုံ့ပြန် dopamine အာရုံခံများအတွက်အပြိုင်လှုံ့ဆျောမှုအခန်းကဏ္ reveal ဖော်ပြသည်။ တကယ့်ကမ္ဘာကြီးအခြေအနေမှာလှုံ့ဆော်မှုပုံစံနှစ်ခုလုံးကအရေးကြီးတယ်” ဟု Saunders ကဆိုသည်။ မင်းကိုလှည့်ပတ်ပြီးပြုမူဖို့လှုံ့ဆော်ခံရဖို့လိုတယ်၊ သင်လိုချင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့အရာတွေရဲ့နေရာကိုသွားဖို့လှုံ့ဆော်မှုပေးရမယ်။ ”
ဤရလဒ်သည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုအားဖြင့်အစပျိုးတွန်းအားနှင့်ဆက်စပ်သော dopamine အာရုံခံရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်၏အရေးကြီးသောနားလည်မှုပေး။ နှင့်ဤလုပ်ငန်းကိုစွဲလမ်းနှင့်အတူရုန်းကန်နေသူတွေအတွက် relapse ၏နားလည်မှုကိုအထောက်အကူပြုရန်။
"အမှတ်အသားတစ်ခု၊ လမ်းကြားတစ်ခု၊ အကြိုက်ဆုံးဘားတစ်ခုသည်ဤအားကောင်းသောလှုံ့ဆော်မှုတန်ဖိုးကိုယူလျှင်၎င်းတို့သည်ပြန်လည်နာလန်ထူရန်အစပျိုးခြင်းများကိုခုခံတွန်းလှန်ရန်ခက်ခဲလိမ့်မည်" ဟု Saunders ကပြောကြားခဲ့သည်။ dopamine ပါဝင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသော်လည်းအနာဂတ်လေ့လာမှုများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရည်မှန်းချက်မှာပုံမှန်အားဖြင့်၊ ကျန်းမာသန်စွမ်းသော cue-ဖြစ်ပေါ်စေသည့်လှုံ့ဆော်မှုသည်စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သောရောဂါများရှိလူသားများတွင်ဖြစ်ပေါ်သောအလုပ်မဖြစ်သောလှုံ့ဆော်မှုနှင့်မည်သို့ကွာခြားသည်ကိုနားလည်ရန်ဖြစ်သည်။
သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ ကပံ့ပိုး မင်နီဆိုတာ Medical School ကျောင်းတွင်တက္ကသိုလ်. မှတ်ချက်: အကြောင်းအရာစတိုင်နဲ့အရှည်အဘို့အ edited နိုင်ပါသည်။
ဗင်္ယာမိန်အမျိုးတီ Saunders, Jocelyn အမ်ရစ်ချတ်, Elyssa ခ Margolis, ပက်ထရီရှာအိပ်ချ် Janak ။ Dopamine အာရုံခံ circuit ကို-defined စိတ်ခွန်အားနိုးဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူ Pavlovian conditional လှုံ့ဆော်မှုဖန်တီး. သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ, 2018; 21 (8): 1072 Doi: 10.1038/s41593-018-0191-4